श्रीमतीले तपाई बुढो हुनुभयो भनेर ‘गा’ली’ गर्छिन् ! अब के गराैँ ? – Krazy NepaL
May 6, 2021 385
करुणा जी, नमस्कार ।
ठूलो सम’स्यामा छु । कहिलेकाहीं दि’क्कलाग्छ र मनमा अनेकौ कुराहरु खेल्छन् । विवाहपश्चात जीवन सुन्दर हुन्छजस्तो लाग्थ्यो तर संसारको सवैभन्दा दुःखी व्यक्ति हुँ भन्ने अभास भैरहेको छ ।
म ४० वर्षीय जागीरे व्यक्ति हुँ । स्थायी जागिर भएपछि मात्रै विवाह गर्छु भन्ने अ’डानका कारण मैले ३६ वर्षको उमेरमा २२ वर्षकी युवतीसँग विवाह गरें । कम उमेरकी केटी विवाह गर्नुको उद्देश्य पनि उनलाई पढाएर जागीर खुवाउने नै हो ।
उनी मलाई बुढो भइसक्नु भयो भनेर गा’ली ग’र्छिन् भने तिम्रो केटाकेटीपन कहिलै गएन भनेर रिसा’उँछु । दुईको उद्देश्य नमिल्दा हाम्रो यौ’न स’म्पर्क कम हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म हाम्रो छोराछोरी पनि भएको छैन ।
विवाह गरेको केही वर्षपछि मैले थाहा पाएँ, जीवनमा जागीर, पैसा, प्रसिद्धि ठूलो कुरा होइनरहेछ । मुख्य कुरा त श्रीमतीसँग व्यवस्थिति रुपमा जीवन चलाउनु नै रहेछ ।
अहिले उनको र मेरो दैनिक जीवनको रुची खासै मिल्दैन । उनी सौन्दर्य, सिनेमा र घुमघाममा रुची राख्छिन् भने म उनले चाँडो भन्दा चाँडो जागीर खानु पर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छु । उनी मलाई बुढो भइसक्नु भयो भनेर गा’ली गर्छिन् भने तिम्रो केटाकेटीपन कहिलै गएन भनेर रि’साउँछु । दुईको उद्देश्य नमिल्दा हाम्रो यौ’न स’म्पर्क कम हुँदै गएको छ । अहिलेसम्म हाम्रो छोराछोरी पनि भएको छैन ।
करुणाजी, उनी २६ वर्षकी भइन् । ४० नपुग्दासम्म मलाई श्रीमती छाडेर केही स’मस्या हुँदैन भन्ने लाग्थ्यो तर आजभोलि जीवन प्रति गम्भी’र चि’न्ता लाग्दैछ । हाम्रो पारिवारिक जीवनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने होला ? – टंक
टंकजी, बूढो महसूस गर्नु व्यक्तिको चि’न्तन र सोचसँग सम्वन्धित बिषय हो । तपाईको सोच, संस्कार, चिन्तन र कार्यशैली युवा स्तरका छन भने तपाईका हरेक गतिबिधिहरुको नतिजा पनि उ’र्जाशील हुन्छन् । जसरी तपाई कुनै जमानामा अध्ययनशील हुनुहन्थ्यो र परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउनु हुन्थ्यो, तपाईले आफूलाई राम्रो क्षमतावान हो भनेर दा’बी गर्नका लागि आज पनि त्यही स्तरको मेहनत गर्नु आवश्यक छ ।
युवा भएर पनि उ नि’ष्कृय छ, जोश जाँगर छैन, नयाँ कुरा जान्न खोज्दैन भने २० बर्षे मानिस पनि बृद्ध हुन्छ । फूर्तिलो, जोशिलो, शारीरिक अभ्यास गरी तन्दुरुस्त भैरहने र ज्ञानका दृष्टिले आफूलाई अद्यावधिक राखी रहने मानिसहरु सँधै युवा भैरहन्छन
नयाँ कुरा जान्न खोज्ने, उर्जाशील भैरहने तपाईको सोच छैन भने कम उमेरमै मानिस बुढो हुन्छन् । ४० वर्षसम्मका व्यक्तिलाई सरकारले युवा मान्ने गरेको छ । तर मनोवैज्ञानिक हिसावमा सोच र चि’न्तनका कारण मानिसहरुलाई बूढो र युवाभनेर परिभाषित गर्न सकिन्छ ।
युवा भएर पनि निष्कृय छ, जोश जाँगर छैन, नयाँ कुरा जान्नखोज्दैन भने २० बर्षे मानिस पनि बृद्ध हुन्छ । फूर्तिलो, जो’शिलो, शा’रीरिक अभ्यास गरी तन्दुरुस्त भैरहने र ज्ञानका दृष्टिले आफूलाई अद्यावधिक राखी रहने मानिसहरु सँधै युवा भैरहन्छन । त्यस्ता ब्यक्तिहरुलाई उमेरले खास फरक पार्दैन ।
तपाईले आफूलाई २०/२२ बर्षे जवान सोचेमा युवाहरुमा हुने जस्तो उ’र्जा कायम रहिरहन्छ । अर्को पक्ष के हो भने तपाईंको ह’कमा श्रीमान र श्रीमतीबीचको उमेरको फरक निश्चय नै बढी हो । यस्तोमा श्रीमान र श्रीमतीबीचको सोचाई, चाहना र प्राथमिकताहरु फरक हुनु स्वाभाविक पनि हो ।
अध्ययनहरुले देखाएअनुसार आदर्श स’म्वन्धका लागि श्रीमान र श्रीमतीबीचको उमेर फरक सामान्यतयाः ३/४ बर्षको मात्रहुनुपर्छ । उस्तै उस्तै उमेरका श्रीमान श्रीमती वा श्रीमान भन्दा श्रीमती केही कमउमेरको भए पनि उनीहरुबीचको हरेक स’म्वन्धमा खास स’मस्या आउँदैन । यौ’नजी’वन स’न्तुष्टिले भरिएको हुन्छ ।
यसका साथै श्रीमती श्रीमानभन्दा बढिउमेरको बिषयलाई ठूलो मु’द्धा बनाउँदैनन् झन् बढि उमेरको भएपनि खासै फरक पर्दैन । बढी उमेर हुने क्रमसँगै अर्थात श्रीमान ७० बर्षको र श्रीमती ५० बर्षको उमेरको अवस्थामा पनि यो त्यति धेरै चासो र चि न्ताको बिषय बन्दैन जति श्रीमानको उमेर ४० बर्ष र श्रीमतीको उमेर २० बर्ष भएको अवस्थामा हुन्छ ।
श्रीमान र श्रीमतीबीचको उमेर १२ बर्षभन्दा माथिको रहेको छ भने उनीहरुका चाह’ना, प्राथमिकता, शा’रीरिक गतिबिधिहरुमा फरक पर्न जान्छ । ३५ बर्ष उमेरको श्रीमान जागिरमा व्यस्त हुन मन पराउने र अन्य जिम्मेवारीलाई पूर्णता दिनखोज्ने खालको हुन्छ भने २५ बर्षभन्दा कम उमेरको केटीको प्राथमिकता पौडी खेल्न जाने, रा’त्रीक्लब जाने, नाँच्ने वा पार्टी कार्यक्रमहरुमा सहभागीहुने, सिनेमा हेर्न मनपराउने हुन्छ ।
२५ बर्ष उमेरकी श्रीमतीलाई उनका उमेरजन्य गतिबिधिहरुको बि’न्दास अनुभव गर्न रो’क्दा अप्रा’कृतिक नि’षेध हुन्छ । मूलको पानी थु’न्न खो’ज्नु जस्तै हुन्छ । अर्को कुरा ४० बर्ष उमेरको श्रीमानलाई २०/२२ बर्षको ग’तिबिधिहरुमा ता’नेर ल्याउँदा त्यही कुरा दोहोर्‍याउँदा हुने जस्तो दि’क्दारी हुनु पनि स्वाभाविक नै हो ।
किनकी उसका पनि उमेरजन्य प्राथमिकता र चा’हना अर्कै खालका हुन्छन । बढी उमेरको श्रीमान कम उमेरकी श्रीमतीका लागि साथी भन्दा पनि अभिभावक जस्तो हुन्छ ।
तपाईलाई लाखौ रुपैयाँको सोच बनाइरहनुभएको हुन सक्छ । तर श्रीमतीलाई २ सय रुपैयाँको टिकट लिएर फिल्म देखाउँन लैजाँदा त्यो भन्दाबढी स’न्तुष्टि प्राप्तहुन सक्छभन्ने कुरा भुलिरहनु भएको हुन सक्छ
यसैलाई उनले सकारात्मक रुपमालिने हो भने श्रीमानबाट अभिभावकले जस्तै बढी केयरिङ पनि पाउने हुन्छ । यहाँ तपाईंहरुको उमेरको फरक बाट सिर्जित सम’स्यालाई हेर्दा श्रीमानले श्रीमतीको उमेरजन्य च’ञ्चले ब्यवहारलाई सहज रुपमा बुझ्ने, त्यसलाई स्वीकार्ने र उनका चा’हना अनुरुपको ब्यवहार गर्ने समाधानको उपाय हुनसक्छ ।
त्यसैगरी अर्को पक्षबाट हेर्दा श्रीमतीले पनि परिपक्व श्रीमानबाट हुने बढी अभिभावकत्व तथा अनुभवबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभ लिनुपर्ने हुन्छ ।
श्रीमानले पनि श्रीमतीबाट सरकारी जागिरको अ’पेक्षा भन्दा श्रीमतीको जागिरप्रतिको चा’हना के छ र के कस्तो जागिरमा रुची छ भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । त्यसै अनुरुप काम गर्ने अवसर दिलाउनुपर्छ । यसले दुबैजनालाई नजिकल्याउन मद्दत पुग्छ ।
त्यसपछि यौ’न जीवनबारे छलफलगर्ने, श्रीमतीको यौ’न चा’हना र स’न्तुष्टिको बारेमा बुझ्ने, यौ’नमा रो’माञ्चकता भए नभएको बुझेर त्यसै अनुसार यसमा निखार ल्याउने काम भएमा उमेरको फरकबीच पनि स*न्तुष्टि प्राप्तिका नयाँ ढोकाहरु खुल्न सक्ने छन । दुबैका चा’हना र आकांक्षाहरुलाई सम्मान गर्न सक्दा फेरि एउटा रमाइलो वातावरण निर्माण हुन सक्छ ।
दुबैजना अलग अलग दिशातिर फर्किने हो भने त उपलब्ध संभावनाहरु पनि गु’म्न सक्छन । त्यसैले उमेरको ठूलो फरकबीचका संभावना खोज्नेतिर लाग्नु नै बेस हुन्छ ।
Prevझण्डै दुइ करोडले हेरिसकेको भिडियोमा यि युवतीले के गर्दैछिन ? पत्ता लगाउनुहोस
“दुनियाँको खु’शी फेरी देखा’इदियो, आयो पार’दर्शी मा’स्क जुन ‘मास्क लगा’य’को मह’सुसनै हुदै’न कस्तो छ त पद्नुस “